सबैलाई चक्मा दिंदै ओलीले गरे क्याविनेट विस्तार - नेपालबहस
सबैलाई चक्मा दिंदै ओलीले गरे क्याविनेट विस्तार
| १४:१९:४३ मा प्रकाशित
२७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज मौजुदा मन्त्रिपरिषदको १९ औं पटक पुनर्गठन गर्दै धेरैलाई फेरि चक्मा दिएका छन् । गएको शुक्रबार मात्रै उनले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ–राजेन्द्र पक्षका १० जनालाई मन्त्रिमण्डलमा भित्र्याएर आफ्ना सहयात्रीहरुलाई किनारा लगाएका थिए ।
यसक्रममा उनले सात वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफैसँग राखेका थिए । धेरैले अनुमान गरे विपरित उनको नयाँ छनौट देखियो । गृह मन्त्रालयमा ओलीले महेश बस्नेतलाई दिने हल्ला थियो । तर बस्नेतले गृह त के कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएनन् । गृहमा ओलीले खगराज अधिकारीलाई ल्याएका छन् ।
यसैगरी ओलीले अर्काे चक्मा दिए – जसपाका राजकिशोर यादवलाई मन्त्री बनाएर । गएको शुक्रबार नै यादवको नाम महन्थ ठाकुरले शहरी विकास मन्त्रीका रुपमा सिफारिश गरेका थिए । तर अन्तिममा राजेन्द्र महतोले यादव उपेन्द्रको मान्छे भन्दै लिष्टबाट नाम कटाइदिए । बरु राजकिशोरका लागि छुट्ट्याएको भनिएको शहरी विकास मन्त्रालय नै आफैं लिने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए ।
राजकिशोर मन्त्री बन्नबाट रोकिएपछि आक्रोशित थिए । त्यसैले उनले उपेन्द्र यादवसँग पनि आफ्ना गुनासा राख्ने क्रम सुरु भइसकेको थियो ।प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको सम्भावना देखेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै कोटाबाट राजकिशोरलाई मन्त्री बनाएका छन् । जसपामा हुन सक्ने सम्भाति विद्रोह रोक्न ओलीले यस्तो रणनीति अपनाएका हुन् ।
यस्तै सञ्चार मन्त्रालय कसले पाउला भन्ने धेरैको अनुमान विपरित ओलीले नैनकला थापालाई ल्याएका छन् । पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल पत्नी नैनकलाको कुनै चर्चा थिएन । यो पनि धेरैका लागि चक्मा नै भएको छ । सम्भवतः इतिहासमै पहिलो पटक सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी महिलाले पाएको यो नै पहिलो अवसर हो । नैनकला यसअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी अध्यक्ष भइसकेकी हुन् ।
ओलीले अर्काे पनि अनौठो पात्रलाई मन्त्री बनाएर चक्मा दिएका छन् । उनले सामान्य प्रशासन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका गणेश पहाडी शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने माधव नेपाल पक्षीय सांसद हुन् । पहाडीको कुनै चर्चा थिएन बरु योगेश भट्टराई वा गोकर्ण विष्ट मन्त्री बन्ने हल्ला थियो । तर पहाडी भए ।
बालुवाटार निकट स्रोत भने पहाडीको नाम योगेश र गोकर्णसँग सल्लाह गरेरै राखिएको दाबी गर्छ । प्रधानमन्त्रीले योगेशलाई आफू नबसेपनि कसैको नाम दिनु भनेपछि पहाडीको नाम दिएको दाबी बालुवाटारको रहेको छ । अहिले मन्त्री पदमा नआएपनि योगेश र गोकर्ण केही दिनमै मूलप्रवाहमा समावेश हुने स्रोतको दाबी छ ।
यसरी हेर्दा ओलीले धेरैलाई चक्मा दिएका छन् । सम्भावित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनापछिको राजनीतिक परिदृश्य आफू अनुकूल बनाउन ओलीले अहिल्यैबाट तयारी थालेको बताइन्छ ।
आज मन्त्री बन्नेहरुमा मोहन बानियाँ विना विभागीय रहेका छन् भने ज्वालाकुमारी साह कृषि मन्त्री बनेकी छन् । यस्तै नारदमुनि रानालाई वन मन्त्री बनाइएको छ भने आशा बिकलाई वन राज्यमन्त्री बनाइएको छ । सबै मन्त्रीहरुले बेलुकी ४ बजे शपथ गर्दैछन् ।
यस्तो छ ओलीको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
एमाले छिरेका पूर्व माओवादीमा चरम निराशा ४ दिन पहिले
आँगनमै औषधि असुरो ! २ दिन पहिले
करिब ३ दर्जन कम्पनीको सर्किट लेबलमा कारोबार ३ दिन पहिले
नदीमा पानीको बहाव बढेसंगै झोलुङ्गे पुल उच्च जोखिममा १ हप्ता पहिले
विश्व बैंकले भारतलाई ५० करोड अमेरिकी डलर दिने २ हप्ता पहिले
चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि सरकार प्रतिवद्ध ३ हप्ता पहिले
डब्ल्यूएचओले भन्यो, भारतमा फैलिएको नयाँ भाइरस ‘डेल्टा भेरिएन्ट’ ! ३ हप्ता पहिले
कांग्रेस सुनसरी–काठमाडौं सम्पर्क समितिको अध्यक्षमा आचार्य ८ महिना पहिले
गायिका शान्ति रिजालको ‘माइती गाउँ’ बजारमा ११ महिना पहिले
व्यवसायीको अधिकारका लागि सरकारसँग लडाइँ गर्न तयार छु : उपाध्यक्ष ढकाल ८ महिना पहिले